အရက်သောက်ခြင်းသည် ဒုစရိုက်မဟုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရက်သောက်ခြင်းသည် ဒုစရိုက်မဟုတ်
Posted by black chaw on Sep 24, 2011 in Creative Writing, Think Different | 13 comments
သုရာ မေရိယ သည် ဒုစရိုက်မဟုတ်
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ” စစ်ကိုယ်တွေ့ ” အတွေ့အကြုံနှင့် အတွေးအခေါ် ဆောင်းပါးများ စာအုပ်ပါ ” ရွှေဥဒေါင်း ၏ ဖြောင့်ချက်များ ” ဆောင်းပါးကိုဖတ်၍ ဤစာကိုရေးပါသည်။
အရက်သောက်တာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကို ယေဘုလျ အားဖြင့် ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။အရက်ကြောင့် ဘ၀ပျက်နေတဲ့လူတွေ၊ အရက်ကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံး ဒုက္ခတွေ တောင်လိုပုံနေကြတာတွေ တွေ့ခဲ့ဘူးပေါင်းများပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ အရက်သောက်တတ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော် မူးပြီးအန်တဲ့အဆင့်အထိ အလွန်အကျွံ မသောက်ဘူးတာပါပဲ။ အရက်မသောက်ရလို့ လေတွေတစ်အေ့အေ့ တက်တဲ့ အဆင့်ကို မရောက်ခဲ့ဘူးပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ကျွန်တော်အရက်သောက်ရတာ ကြိုက်ပါသည်။ အရက်ကိုလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင် သောက်ပြီး အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေသောသူများကိုတွေ့လျှင် အရက်ကို သိက္ခာချနေတာပဲဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ အရက်မှာ အပြစ်လုံးဝမရှိပါ။ အဆင်အခြင်မဲ့ သောက်သူမှာသာ အပြစ်ရှိသည်ဟု ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါသည်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဟု ဆိုစကား ရှိပါသည်။ အလွန်အကျွံလုပ်လျှင် ဘယ်အရာမှ မကောင်းပါ။ စိတ်ညစ်လျှင်သောက်သည်။ စိတ်ပျော်လျှင်သောက်သည်။ အသည်းကွဲလျှင်သောက်သည်။ အကြောင်းမျိုးစုံပြ၍ အရက်ကို သောက်ကြသည်။ မည်သို့ပင်သောက်သောက် အရက်သောက်တတ်သူများတွင် ရေချိန် အရေးကြီးပါသည်။ သောက်သူတိုင်းတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အရက်၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်စွမ်းမတူညီကြပါ။ အချို့က နှစ်ပက်လောက်သောက်လျှင် မူးပါသည်။ အချို့က တစ်ပိုင်းလောက်သောက်လျှင်မူးပါသည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ရေချိန်မတူကြပါ။ ရေချိန်ကျော်ပြီးသောက်လျှင် အရက်က လူကို ဒုက္ခပေးပါတော့သည်။ လူမှန်းသူမှန်းမသိဖြစ်ကြရသည်မှာ မိမိ ခံနိုင်စွမ်းထက်ပိုသောက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူတော်တော်များများသည် အရက်သောက်သူတိုင်းကို ယစ်ထုပ်ကြီးများဟုထင်တတ်ပါသည်။ အရက်သောက်သူတိုင်း ယစ်ထုပ်ကြီးများ မဟုတ်ပါ။ အရက်သောက်သူတိုင်း လူဆိုးများမဟုတ်ကြပါ။ ထိုအကြောင်းကို ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ရေးသော ”ရွှေဥဒေါင်း၏ ဖြောင့်ချက်များ” ဆောင်းပါးတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ စာအချို့ကို ကူးယူတင်ပြခွင့်ပြုပါ။
‘ဗုဒ္ဓ ၏ တရားတော်အရ သီလဟူ၍တစ်ဌာန၊ ဒုစရိုက်ဟူ၍ တစ်ဌာန ဖေါ်ပြထားကြောင်း၊ သီလမှာ ကောင်းသော အလေ့အထဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိ၍ ဒုစရိုက်ဟူသည်မှာ မကောင်းသောအကျင့် (၀ါ) အပါယ်သို့ကျစေတတ်သော အကျင့်ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်း၊ ဒုစရိုက်မှာ ၁၀ ပါးရှိ၍ သီလမှာ ၅ ပါး၊ ၈ ပါး၊ ၉ ပါး၊ ၁၀ ပါး ဟူ၍ရှိကြောင်း၊ ဒုစရိုက်မလုံလျှင် အပါယ်သို့ ကျစေတတ်သည်။ သီလမလုံခြုံလျှင် အကျင့်ပျက်သည်ဟု ယူဆရမည်မဟုတ်ပါလော”
”ဥပမာ ပန်းပန်ခြင်း၊ ညစာစားခြင်းတို့သည် သီလပျက်သော်လည်း အပါယ်သို့ ကျတတ်သည်ဟုမဆိုနိုင်၊ ထိုနည်းတူ သုရာမေရိယကျူးလွန်မှုသည် သီလပျက်သော်လည်း ဒုစရိုက်၁၀ ပါးတွင် မပါသောကြောင့် အပါယ်သို့ ကျကောင်းသောအပြုအမူမဟုတ်”
”ဒုစရိုက် ၁၀ ပါး တည်းဟူသော ကာယကံသုံးပါး၊ ၀စီကံလေးပါး၊ မနောကံသုံးပါး တို့တွင် သုရာမေရိယ မပါချေ”
“သုရာမေရိယ လွန်ကျူးပြီးနောက် အခြားသော အကုသိုလ်အမှုများ ပြုလွယ်တတ်သည် ဆိုခြင်းကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ၄င်းအကုသိုလ်အမှုများ မပြုရသေးမီကတည်းက အပြစ်ကြီးနေပြီဆိုခြင်းမှာ သဘာဝမကျကြောင်း၊ သုရာမေရိယဖေါက်ဖျက်သော်လည်း အကုသိုလ်မှုမပြုပဲနေလျှင် ဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ သီလတခြား၊ ဒုစရိုက်တခြား ရှိသင့်ကြောင်း၊ သီလထဲမှ သိက္ခာပုဒ်ကို ဒုစရိုက်ကဲ့သို့ (အဌကထာအရက) သွင်းသော်လည်း သဘာဝမကျသဖြင့် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ လူမိုက်တွေ လိမ္မာအောင် ခြောက်လှန့်ပေးရသည်ဆိုသော်လည်း တိကျမှန်ကန်ခြင်းကိုလည်း ထောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း”
“ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ထဲ၌ သုရာမေရိယသည် ကိုယ့်မယားနှင့်ကိုယ် နေခြင်းကဲ့သို့ ကာမဂုဏ်မှုတစ်ခုဖြစ်၍ တရားအားထုတ်ခြင်း၌ အနှောက်အယှက်ပြုသော်လည်း ‘ငရဲကြီး’ သောအလုပ်တစ်ခု မဟုတ်ဟူ၍ (ဘယ်သူဘာပဲပြောပြော)ယူဆသူဖြစ်သည်”
ဆရာကြီးသည် အရက်သောက်သဖြင့် ငရဲမကျနိုင်ဟု ယူဆသော်လည်း အရက်၏ မကောင်းကျိုးများကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးပြသွားပြန်ပါသည်။
“သုရာမေရိယ၏ အပြစ်များမှာ ငရဲဖြင့်ခြောက်ဖို့မလို၊ လက်တွေ့အားဖြင့်ပင် ကြီးကျယ်လှပါပြီ၊ ပိုက်ဆံကုန်ခြင်း (များခဲ့လျှင်) ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ ဒေါသကြီးတတ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းသဘောတရားလျော့ပါး ကုန်ခန်းတတ်ခြင်း၊ လူကဲရဲ့ ခံရခြင်း၊ တောင့်ခိုင်သောစိတ်ဓါတ် (Will power) လျှောဆင်းကျဆုံးတတ်ခြင်းတည်းဟူသော အကျိုးတရားများသည်ပင်လျှင် သေအရက်ကို ရှောင်ကြည်ဖို့ ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်ခဲ့ပါပြီ။””
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ၏ ဆောင်းပါးကိုဖတ်မိသူတိုင်း တွေးစရာ၊ ပြောစရာ၊ ဆွေးနွေးစရာ၊ အငြင်းပွားစရာလေးများရှိကြပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးလိုက်စားသူများ တွင် ပြောစရာများရှိလိမ့်မည် ဟု ထင်ပါသည်။ ဆရာကြီးသည် အရက်သမားများ ဘက်မှ ရှေ့နေလိုက်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်၊ အရက်သောက်ခြင်းသည် မကောင်း၊ သောက်ခဲ့လျှင်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ ဒုက္ခမပေးဘို့ ညွှန်ပြဆုံးမခဲ့သည် ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။
တွေးကြည့်တော့လဲ ဟုတ်သလိုလို ပဲ
ဘာသာရေး ဆောင်းပါး စာအုပ်များစွာ ကို လည်း
ရေးသား ခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ် ။
ဆရာကြီး ဟာ ဘယ်လောက်ထိ တော်သလဲ ဆိုရင်
ဘာသာရေးလိုင်း ဘက်သို့ ပြောင်းလဲ ရေးချိန်မှာလည်း
ဆရာကြီးရဲ့ ဘာသာရေး စာဖတ်ပရိသတ် ဟာ
ဆရာကြီးရဲ့ စာတွေ ကို ဖတ်အပြီး
ဆရာကြီးကို ကြည်ညိုလွန်းလို့ 
အိမ်ပင့် ပြီး စားကောင်းသောက်ဖွယ်များဖြင့် တည်ခင်း
တရားဓမ္မ များ ကို ဆွေးနွေးကြတယ် လို့ 
သော်တာဆွေ ရဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာ ဖတ်ဖူးလို့ သိရပါတယ် ဗျာ ။
ကျုပ်ကတော့ ငယ်သေးလို့ 
ဘာသာရေး ကို ကျကျနန မလုပ်သေး ၊ မလိုက်စားသေးပါသဖြင့်
ကောင်းကောင်းကြီး မဆွေးနွေးတတ်ပါကြောင်း ။
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရေးခဲ့တဲ့ ဓမ္မဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ချင်ရင် http://www.vimuttisukha.com/search/label/%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%82%92%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%B6 မှာ တင်ထားပါတယ်ကွယ်။ မနောတံခါးလေး ဖွင့်ပြီး ဖတ်စလိုပါတယ်။
ဆရာကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်လနီဦးအောင်ပု နဲ့ ဆရာကြောင်ကြီးရဲ့ ထောက်ခံချက်ရမှ ဒီအဆိုကို လက်ခံပါမယ်။း)
လူ့ဘ၀၏ သဘာဝပေးစည်းစိမ်ကြီးတခုသာဖြစ်၍ ကျမ်းမာေ၇း၊လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတို့တိုးတက်ကောင်းစေသော အထောက်အကူတခုပင်တည်း..။
လူသားသည်.. လူကိုသတ်ခြင်းထက်..ဆိုးသော ဒုစရိုက်ဟူ၍ ရှိအံ့မထင်..။
အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော သတင်းကို ကြည့်ပါလော့..။
Ad Council : Drunk Driving Prevention
Drunk or impaired driving killed 13,846 people in 2008. That’s one person every 45 minutes. That makes it everyone’s problem. It seems that many people …
အရက်သောက်ခြင်းက ဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒုစရိုက်အလုပ်ကို အားပေးရာရောက်တဲ့အရာတစ်ခုပါဘဲ.. အရက်သောက်လိုက်ပီးတော့ ဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး အရက်သောက်ပီး မှားကြတာများကြပါတယ်.. မသောက်ဖြစ်တာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်
အချဉ်ဖောက်ပြီး မူးဘို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရင် သေရည်လို့ဘဲအလွယ်ပြောရမလားမသိ
အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးဆင်ခြေကတော့ တန်ဆေးလွန်ဘေး ပေါ့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ သေရည်ကို မသောက်ဘို့ကို အပီ ပညက်ထားတာဘဲ
အရက်ဆိုတာမပြောနဲ့ ရောဂါဘယတွေဖြစ်လို့ ဆေးဝါးတွေကိုမှီဝဲရင်တောင်
ဆေးဝါးမှ အရက်မှမဟုတ်ဘူး သတ္တဝါတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဟာ အသက်ရှင်ဘို့တွက်
အဟာရကို မှီဝဲရမှာဘဲ ဒါ သတ္တဝါတိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဘဲ
အဲ့သည်အဟာရကို မှီဝဲတဲ့နေရာမှာ သမ္မာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ မှန်စွာအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမှာတောင်
အဟာရကို ခန္ဓာနဲ့မျှအောင်စားမှ သမ္မာအာဇီဝ ဖြစ်မှာ
ငါတရားသဖြင့်ရှာထားတဲ့ အဟာရဘဲဆိုပြီး လွန်အောင်စားကြည့်ပါလား ပျက်စီးမှာဘဲ
မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်က နောင်ဆုံးတောင် မှာသွားသေးတဲ့စကားတော်မြတ်ဘဲ
ဒီတော့ကာ များတို့ ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ :D ကျုပ်တို့ ဆက်တွေးကြည့်ရအောင်
ကျုပ်ကတော့ လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာကို ဘယ်တော့မှ မတွဲဘူး
တွဲလို့မရဘူးလို့လည်းယုံကြည်တယ် ခင်ဗျားတို့ တွဲခြင်ရင်တွဲကြ
ခုလည်း မသိမသာတွဲလိုက်ပြန်ပြီ လိုက်ပြီးအတိုက်ခံလုပ်ဘို့တော့ အလိုမရှိဘူး
ခင်ဗျားတို့ ဆင်ခြင်ဘို့ဘဲ တိုင်တွန်းပါတယ်
တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဟောတော်မူတဲ့ တရားဓမ္မရဲ့ မူရင်းဆို့စ်က
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတည်းကို ကြားလိုက်သိလိုက်တာနဲ့
ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဘာ့ကြောင့်မှာခဲ့သလဲ မမေ့မလျှော့ကြဘို့
ယ္ခုလက်ရှိ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ ဓမ္မစကားတစ်လုံးကိုကြားတာနဲ့
သစ္စာတရားကို သိမယ်လို့ ယုံကြည်သလား
ဒါဆိုစာတွေဖတ်ကြည့် တစ်လုံးမဟုတ်ဘူး တစ်အုပ်လုံးဖတ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး
မြတ်စွာဘုရား တရားတစ်ခွန်း ဟောလိုက်တာနဲ့ ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းတွေ
ဆိုတော့ ကျုပ်တို့ဟာ တရားစကားတစ်ခွန်းမှမဟုတ်ဘူး
စာအုပ်ပေါင်း အုပ်တရာလောက် အရည်ကျိုပြီးသောက်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး
အရက်ကို အရသာခံပြီေးသာက်တော့ တဏှာဖြစ်တယ်
ဒါ့ကြောင့် တဏှာလို့ဆိုလိုက်တိုင်း ဟိုကောင်မဒီကောင်မ မှမဟုတ်ဘူး
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သတ္တဝါတွက် တကယ်လုပ်ရမဲ့ တရားသဖြင့်ရှာဖွေထားတဲ့
အဟာရကို မှီဝဲတဲ့နေရာမှာ သာယာရင်တောင် တဏှာဘဲ
ဆက်ပြောရရင်တော့ ကျုပ်တရားရှည်လိမ့်မယ် ဖြတ်မှ
ထို မူးယစ်စေသာ သေရည်ကိုရှောင်သင့်တယ်
ဘာအရက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် သောက်ပြီးရင် သောက်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး
ရည်ဝေမယ် ထိုရည်ဝေခြင်းဟာ မေ့လျှော့စေခြင်းဘဲ
ဒို့ကတော့ ဘယ်လောက်မူးမူးမမေ့တတ်ဘူး ဆိုတာတွေကတော့ သနားတယ်
( ထိုသေရည်ကို သောက်ပြီး ရီဝေယစ်မူးခိုက် ထိုသတ္တဝါသည် သစ္စာတရားကို လုံးဝမသိနိုင် )
လောကီနယ်ထည်းကနေတော့ သတိရှိရင်ဘာညာ ဆိုတာတော့လက္ခံတယ်
လောကုတ္တရာနယ်ထည်းကတော့ နည်းနည်းဘဲမူးမူး များများဘဲမူးမူး
မူးနေတဲ့အခိုက် သစ္စာတရားကို ဘယ်တော့မှ ကိုယ်တွေ့ ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်ပေါ့ဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ ခင်ဗျားတို့ ဆင်ခြေပေးဘို့ သန္တသိအမတ်ကြီး အကြောင်းကို ညွှန်းပေးလိုက်ပြီး
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု သည် အရက်သောက်ခြင်းအမှု့ကို အားထုပ်ရန်အလို့ငှာ
”အရက်သောက်ပြီးရင် လူတယောက်ဟာ မလုပ်ရဲတာဘာမှ မရှိဘူး ။
ကံငါးပါးကို လဲ အလွယ်တကူ ကျူးလွန်မိသွားနိုင်ပါတယ်” လို့ဆရာတော်တပါးရဲ.စာအုပ်ထဲမှုာ
ဖတ်ရဖူးတယ်။ မျက်မြင်လဲ အရက်ကြောင့် အောင်မြင်တဲ. မိသားစု တွေုဘ၀ပျက်သွားခဲ့ ရတာတွေ၊ သာယာတဲ.အိမ်ထောင်တွေ ပြိုကွဲပြီး တကွဲတပြားစီဖြစ်သွားကြတာတွေ……….အိုး….
အော်……အရက် နှင့်ဒုစရိုက်……..
့ …….. ဒုစရိုက်နှင့် အရက်…………..လုံးဝ ခွဲမရ ဒွန်တွဲနေပါလားနော်။
ထို့ေ ကြာင်.” အရက်သောက်ခြင်းသည် ဒုစရိုက်အားလုံးဧ။် မြစ်ဖျားခံ၇ာ” ဟုသာ။
အရက်သောက်ကြတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းနဲ့ သောက်တဲ့လူတွေ ပြဿနာ မရှိကြပါ (လူလို သောက်တယ် လို့ ဆိုတာပါ)
စည်းကမ်းနဲ့ ဆိုတာ သူ့ limit အတိုင်း ပုံမှန်လေး နေထိုင် စားသောက်တာပါ
ဒါဆိုရင် ကျန်းမာရေးကိုလဲ မထိခိုက်ပါဘူး .. အခြား လူမှုရေး ပညာရေး စီးပွားရေးကိုလဲ မထိခိုက်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေမှာပါ
သို့သော် လူလို မသောက်ကြလို့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ကြသလို အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် မိတ်ပျက်
လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်လောက်အောင်ကို ဆိုးဝါးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို သိလျက်နဲ့ များများ သောက်မိသူတွေ နည်းနည်းသောက်ပြီး သွေးဆိုးသူတွေအတွက်က ဝေရာမဏိ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်
ဝေရာမဏိ မဖြစ်ရင်တော့ သေရွာအထိသွားပြီး အောက်ပြည်အောက်ရွာက တက်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါကြောင်း
ကိုယ်ကတော့ အရက် ဆို၇င် ဝေးဝေးကပဲ..ရှောင်ပါတယ် ။ (ဈေးကြီးလို့ )
တကယ်တော့ အရက်သောက်တာမကောင်းပါဘူး (အမြည်းလေးပါရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့နော့)။
အရက်သောက်ပီးကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ခြင်း … ရမ်းကားခြင်း..ေxxာက်တစ်လွဲ
ဘက်မှထောက်ခံပါရစေ……… :-) :-)